Ahoana ny fomba hanodinana horonantsary amin'ny iPhone | Vaovao IPhone
Ahoana ny fomba hanodinana horonantsary amin'ny iPhone
Ignacio Sala | | Fampiharana iPhone, Fampianarana sy torolàlana
Ny fitaovana finday marani-tsaina, fantatra amin'ny anarana hoe finday avo lenta, dia nanjary fitaovana fampiasan'ny mpampiasa rehetra tazomy ireo fotoana tena lehibe indrindra, mamela tanteraka ny fakan-tsarimihetsika feno volo, na dia manome fatra avo lenta kokoa aza ity farany, mety indrindra rehefa te-haka sary amin'ny hazavana ambany isika.
Ny maika dia mpanolotsaina ratsy foana ary azo antoka fa indraindray dia nesorinao haingana ny iPhone tao am-paosinao ary nanomboka nandrakitra hetsika nefa tsy tsapanao fa tsy tena marina ny filany azy, ary nivadika tsara ilay sary. na ny lafiny. Amin'ireo tranga ireo, raha te hahalala ianao ahoana ny fihodinana horonantsary Afaka mampiasa ny rindranasa asehonay anao eto ambany izahay.
Saingy mety tsy izany ihany no antony mety haniriantsika hanodinana horonantsary iray, fa mety ho hitantsika koa ilay horonantsary voarakitra izay tsy dia tsara loatra amin'ny toerana nanaovantsika ilay rakipeo, ka nanery anay hihodina azy raha tiantsika ho lavorary ny valin'ny horonantsary. Ao amin'ny App Store dia afaka mahita rindranasa marobe izay mamela antsika hanao an'io isika, mitazona hatrany ny vahaolana mitovy ary tsy manova ny kalitaon'ny horonantsary. Atorinay anao izao ny fampiharana tsara indrindra hanodinana horonan-tsary avy amin'ny iPhone.
1 iMovie hanodinana horonantsary
2 Horonan-tsary sy Atsimbadiho ny horonan-tsary - Tsy voafetra ny fotoana
3 Horonan-tsary sy Atsimbadiho
4 Horonan-tsary & Atsimbadika horonantsary
6 Video Square
7 Horonan-tsary sy horonan-tsary HD
8 Torohevitra fototra rehefa manoratra horonantsary
iMovie hanodinana horonantsary
Hanomboka ity lisitra ity amin'ny fampiharana maimaimpoana izay atolotray antsika Apple fa tsy hamorona horonantsary mahafinaritra fotsiny, fa ahafahantsika manova azy ireo ihany koa mba hanapaka azy ireo, hanodinana azy ireo ... Amin'ity tranga ity izay zava-dehibe amintsika momba ity fampiharana ity dia ny safidy izay atolotray antsika amin'izany fotoana izany hanodinana horonantsary. Ny fampisehoana tsotra be izany fa toa tsy eo io safidy io satria tsy mila manampy an'io horonan-tsary resahina io fotsiny isika ary ahodina amin'ny rantsantanana roa amin'ny orientation tadiavintsika. Vantany vao vita io fizotran-javatra io dia mila tsindrio fotsiny ny bokotra Done isika raha te hitahiry ny orientation vaovao ary hanondrana ilay horonan-tsary ho any anaty eletronay amin'ilay vahaolana noraisim-peo, raha tsy izany dia te ho very kalitao eny an-dalana isika.
Horonan-tsary sy Atsimbadiho ny horonan-tsary - Tsy voafetra ny fotoana
Ny olana sedrainay amin'ity karazana fampiharana ity dia ny hoe sarotra be ny manadino satria ny ankamaroany dia manana anarana mitovitovy, toy ity fampiharana ity sy ny manaraka Video Rotate & Flip (tsy misy fe-potoana), aleoko ihany ny manohy mampiasa ny anarany amin'ny teny Anglisy satria mamela betsaka ny faniriana ny fandikan-teny, mamela antsika hanova ny firoboroboan'ireo horonantsarinay maimaimpoana izany ary tsy misy marika fanampiny. Mazava ho azy, ny mpamorona dia tsy namorona ONG, ka takalony tsy maintsy miaritra dokambarotra marobe isika, doka azontsika esorina amin'ny fandoavana 3,49 euro. Mitaky iOS 8.0 na taty aoriana ary mifanaraka amin'ny iPhone, iPad, ary iPod touch.
Horonan-tsary sy Atsimbadiho
Ity rindranasa ity, miaraka amin'ny iMovie, no fampiharana izay matetika ampiasako hanodinana horonantsary rehefa hitako fa ilaina ny manao izany. Ny Video Rotate & Flip dia mamela antsika ahodino ny horonan-tsary na aiza na aiza misy azy fa manolotra maody fitaratra izahay mba hamadihana ny horonan-tsary, zavatra izay zara raha misy fampiharana manolotra anay ao amin'ny App Store.
Ity fampiharana ity dia mifanaraka amin'ny iPhone sy ny iPad ary ny iPod touch. Video Rotate & Flip dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 2,29 euro ary iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra azo jerena ao amin'ny magazay fampiharana paoma. Tsy isalasalana fa 100% no atolotra ho an'ity karazana toe-javatra ity. Ny Video Rotate & Flip dia mitaky iOS 8.0 na taty aoriana ary mifanaraka amin'ny iPhone, iPad, ary iPod touch.
Horonan-tsary & Atsimbadika horonantsary
Rotate & Flip Video dia miavaka amin'ny maha-izy azy fampiharana maimaim-poana mamela antsika hanova ny fironan'ireo horonan-tsary manomboka amin'ny mitsangana ka hatrany amin'ny marindrano na ny mifamadika amin'izay no haingana sy mora, tsy misy safidy azo amboarina. Rotate & Flip Video dia mila iOS 9.1 na taty aoriana hiasa ary mifanaraka amin'ny iPhone, iPad, ary iPod touch.
Horonan-tsary ahafahantsika mihodina horonantsary amin'ny famantaranandro na amin'ny famantaranandro, ahafahantsika manodina ny horonan-tsary amin'ny degre 90, 180 na 270 miaraka amina mpampiasa tsotra tena tsotra izay tsy mila fahalalana be. Raha vantany vao navadikay ilay horonantsary dia azontsika atao ny manondrana ny valiny azo tamin'ny famahana azy tany am-boalohany ho any anaty kodiaranay mba hahafahantsika mizara izany na manova azy amin'ny fampiharana hafa. Video Rotate dia azo alaina maimaim-poana, mitaky iOs 9.0 na taty aoriana ary mifanaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod touch.
Square Video dia rindrambaiko azo alaina maimaimpoana ao amin'ny App Store saingy miaraka amin'ny doka, doka azontsika esorina amin'ny fandoavana 3,49 euro. Ity fampiharana ity dia tsy ahafahantsika mihodina, manitatra na manangona ireo horonantsary ihany koa mandeha ho azy mikarakara ny fampifanarahana azy ireo amin'ny Instagam hialana amin'izany mandritra ny fizotry ny fampidinana dia manapaka ny toerana tokony tsy hanaovany azy ny serivisy. Ny takiana amin'ny Video Square dia natao ho an'ny iOS 7.0 na taty aoriana ary mifanaraka amin'ny iPhone, iPad, ary iPod touch izy io.
Horonan-tsary sy horonan-tsary HD
HD Video Rotate and Flip dia manome antsika irery ny fahafaha-manao mihodinkodina ho azy ny horonan-tsary ho any amin'ny orientation marina izay tadiavinay. Raha vantany vao vita ny fiovam-po dia azontsika atao ny manondrana azy io amin'ny famahana azy tany am-boalohany ho any anaty roolon'ny fitaovantsika. Ity fampiharana ity Misy vidiny 2,99 euro ary mitaky iOS 9.0 na taty aoriana hiasa tsara. Ankoatr'izay dia mifanaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod touch izy io.
Torohevitra fototra rehefa manoratra horonantsary
Inona izao hainao ny mihodina video avy amin'ny iPhone, hanome torohevitra fototra vitsivitsy izahay mba hitrandrahana tsara amin'ny fakantsarinao finday.
Betsaka ny mpampiasa manana mania an'ny rakipeo horonan-tsary amin'ny maody sary, satria amin'ity fomba ity dia azon'izy ireo atao ny misambotra bebe kokoa ny atiny nefa tsy mihetsika amin'ny toerana misy azy ireo, fa rehefa ny fampisehoana azy amin'ny efijeran'ny solosainantsika na amin'ny fahitalavitra dia hitantsika ny fomba namoizantsika ny atiny fanampiny izay teo amin'ilay sehatra raha ho nosoratanay tamin'ny fomba marindrano izany. Noho izany dia ampirisihina hatrany ny hiala kely amin'ny sehatra mba hahafahana misambotra fampahalalana miavaka kokoa.
Raha mazàna isika sakano ny fihodinan'ny efijery an'ny iPhone Ary raha fantatsika fa mila mampiasa fakantsary isika, dia tsara kokoa ny hanafoanana io safidy io mba hialana amin'ny horonantsary rakitsary rehetra voarakitra an-tsary.
Aza mampiasa zoom nomerika. Ny zoom dizitaly dia tsy mampiasa lantira hanakaiky kokoa ilay zavatra, fa ny zavatra ataony dia ny manitatra ny sary hitantsika amin'ny fahaverezan'ny kalitao. Raha te-hanoratra akaiky ilay zavatra ianao dia manakaiza rehefa manoratra ianao, io no zoom tsara indrindra azontsika jerena amin'ny finday avo lenta.
Aza mitahiry na inona na inona manatrika ny masoandro na ny mazava mivantana, satria ny hany zavatra ho tratrarintsika dia ny firaketana ireo sary an-tsehatra nefa tsy misambotra antsipirian'ny olona na zavatra hita ao amin'ilay horonan-tsary. Ny fakan-tsarimihetsika video matihanina dia natao ho an'ireo karazana toe-javatra ireo fa tsy an'ny an'ny smartphone, na manao ahoana na manao ahoana ny iPhone 7 Plus.
Manantena izahay fa aorian'ireo sosokevitra sy toro-hevitra omena anao dia tsy manana ahiahy intsony ianao ahoana ny fihodinana horonantsary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ahoana ny fomba hanodinana horonantsary amin'ny iPhone
Raha mampiasa WhatsApp handefasana horonantsary ianao dia manome safidy anao hanodinana azy.
Spotify mandefa lisitra playlist vondrona amin'ny alàlan'ny Messenger
Betsaka ny sary sy horonan-tsary momba ilay iPhone 8 noheverina ho tafiditra anaty harato